Zencastr: Soraty mora foana ny tafa sy dinika Podcast anao amin'ny Internet | Martech Zone
Alakamisy 2 martsa 2017 Zoma, Martsa 3, 2017 Douglas Karr
Mpinamana sy tompon'ny famoronana amin'ny podcasting rehetra i Jen Edds avy any Orinasa mpampita vaovao Brassy. Tsy dia matetika aho no mahita azy, fa rehefa ataoko io dia ihomehezana be foana. I Jen dia olona manan-talenta iray - mampihomehy izy, mpitendry mozika sy mpihira manan-talenta izy, ary izy dia iray amin'ireo podcaster efa za-draharaha indrindra fantatro. Ka tsy nahagaga raha nizara fitaovana vaovao tamiko izy izay mety hahaliana anao olona - Zencastr.
Raha podcaster efa ela ianao dia azo inoana fa manana ianao mixer board ary mikrôfôna sy headphones tsara indrindra. Raha podcaster vaovao ianao dia mety manana mixer nomerika. Manomboka ny fahasarotana rehefa te hitondra vahiny lavitra ianao. Izahay dia nanao ny fitafianay Studio podcast Indianapolis miaraka amin'ny Mac Mini sy ny interface audio USB mpivady mba hamoahana Skype na audio hafa ao anaty mixer-nay.
Na dia mamaha ny teknolojia aza izany dia mila tariby ny mixer-nao na programa ny mixer dizitaly anao mba hamoahana ireo olona ao amin'ny studio mankany amin'ny bus mankany amin'ireo olonao amin'ny Internet. Ary tsy maintsy azonao antoka ny tsy hametahana ny feon'ny vahininao raha tsy izany, handre ny akony ny mpitsidika anao amin'ny Internet. Tsy ianao irery no manana ireo olana ireo, fa maro ny programa fifandraisana an-tserasera (toy ny Skype) mandika sy mampihena ny feo. Mitovy amin'ny maheno olona manao antso an-tariby amin'ny onjam-peo amin'ny findainy.
Nahazo izany rehetra izany ve ianao? Eny… tena nahasosotra tokoa indraindray. Niara-niasa tamin'ny eo an-toerana aho injenieram-peo Brad Shoemaker sy ny injenieran'ny Behringer hampandeha tsara azy rehetra ary nanandrana amina sehatra audio ho an'ny firaketana an-tserasera madio kokoa izahay.
Mazava ho azy, tsy mila an'izany rehetra izany ianao hatrizay Zencastr eto! Na dia misy sehatra an-tserasera hafa aza ho an'ny firaketana - toa ny BlogTalkRadio (niainga izahay satria tsy afaka naka feo an-tserasera kalitao), manome i Zencastr firaketana avo lenta ary namboarina ho an'ny podcast izay mety misy vahiny maromaro avy amin'ny toerana samihafa.
Zencastr dia toy ny fananana mpitam-boky ao anaty rahona, ary voafetra ihany aza ny fahaizany mifangaro:
Làlana iray misaraka isaky ny vahiny - Zencastr dia mirakitra ny feo tsirairay eo an-toerana amin'ny kalitao madio. Tsy misy intsony ny fisintahana noho ny fifandraisana ratsy. Tsy misy fiovana amin'ny kalitao intsony mandritra ny seho. Tsy misy afa-tsy audio mazava.
Firaketana amin'ny WAV tsy misy fatiantoka - Aza manaiky lembenana amin'ny kalitao. Zencastr dia mirakitra ny vahininao amin'ny WAV 16 bit 44.1k tsy misy fatiantoka mba hahazoanao feo tsara indrindra hiaraha-miasa.
Soundboard ho an'ny fanovana mivantana - Ampidiro mivantana ny fampidiran-dresakao, doka, na feo hafao rehefa manoratra ianao. Mamonjy anao ny fotoana ilaina amin'ny fanovana ireo mandritra ny famokarana aorian'ny.
VoIP namboarina (Voice over IP) - Tsy mila mampiasa serivisy antoko fahatelo toa Skype na Hangouts. Afaka miresaka mivantana amin'ireo vahininao amin'ny alàlan'ny Zencastr ianao.
Postproduction mandeha ho azy - Miteraha làlana mifangaro tokana miaraka amina fanatsarana feo voarindra hamadihana ny rakipeo ho lasa fifangaroana matihanina vonona hamoaka.
Fifaneraserana amin'ny rahona matevina - Atolotra ho azy ao amin'ny kaontinao Dropbox ny rakipeo mba hanovana sy hizara mora. Google Drive ho avy tsy ho ela.
Hey… ary raha vao manomboka ianao, Jen dia nanamboatra làlana iray manontolo manomboka podcast anao manokana tsy maintsy atao izany!
Ny Brassy Broad's Brass Tacks Pod-Class
Tags: behringermixer nomerikaMixerpodcastingzencastr